Baaritaanka galay ATN ee Malmö qaadataa ugu yaraan lix bilood - Android TV - Android TV News
Home · Android TV · Baaritaanka galay ATN ee Malmö qaadataa ugu yaraan lix bilood
Baaritaanka galay ATN ee Malmö qaadataa ugu yaraan lix biloodFirst, wakhti ka mid ah xeer count in baaritaanka sanduuqyada ATN la dhammeeyo karo. Taas macnaheedu waa in macaamiisha u leeyihiin in ay sugaan on channels TV ay.
Waxaa hadda wax yar ka badan laba todobaad ka hor, bilayska ayaa weeraray shirkad ee Malmo oo xiray saddex qof. Shirkadda ayaa guraa channels TV ka Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika iyo iyagii ka iibiyey on macaamiisha adduunka oo dhan. dembi ayaa lagu eedeeyay waa jebinta copyright. Shirkadaha Dhowr TV sheegan in aanay fasax u channels ay iibin siiyey.
baaritaan booliska ayaa ka socda - iyo sii wadi doonaan in ay sidaa sameeyaan in muddo ah oo wanaagsan. Xeer Henrik Rasmusson oo sheegtay in ay u badan tahay ma noqon doonto wax Xirfado sanadkan.
- Waxaan heystaa taariikh ugu horeysay ku saabsan deynta iyo waa 1da December. Laakiin waxaan ka dhigay ka dibna cad in ay jiraan ma noqon doonto in ku filan. Waxaan lagu qasbi doonaa in ay weydiiso waqti dheeraad ah.
Police qabtay kombiyuutarada, server iyo telefoonada gacanta lagu guda jiro weerarka. qalabka oo dhan waa in dib loo eegaa iyo shirkadaha telefishinka kala duwan si ay u soo xiriir.
Early on waxay ahayd saddex guuto in lagu sameeyo sheegashada magdhow ka dhanka ah shirkadda Malmö. Waxa ay Diva Medya Hizmetleri Limited, Bein Media Group LLC iyo ART. Si wada jir ah, ay u baahan yihiin 200 oo milyan oo karoon. Hadda, waxaa jiray laba dacwoodayaashu dheeraad ah. Laakiin ku alla kii uu doonayo, waa Henrik Rasmusson ma muujin.
- Waxay ku lug leedahay codsadeyaalka oo aan u baahan magdhaw, oo sidaas daraaddeed ma aan tegi doonaa waxa uu yahay, ayuu yidhi.
- Si kastaba ha ahaatee, waxay ku sheegeen in ay doonayaan in ay ka qayb qaataan baaritaanka.
Shuruudaha dambe iman karo
Dacwoodayaasha dheeraad ah ay u badan tahay in aad dalbato. Xeer-ilaaliyeyaasha iyo bilayska ah ayaa hadda bilaabi doona shirkad television xiriiraya in ay ahayd qayb ka mid ah sahayda. Oo in shirkad uma baahna magdhow hadda macnaheedu ma aha in aan ka dalban doono.
- Shuruudaha iman karo ee jidka oo dhan si ay maxkamad, ayuu yidhi Henrik Rasmusson.
- Waxa kale oo ay dib u yimaado. Iyada oo ku saleysan kiiska dembiyada waxaa suurtagal ah in ka dib dacwayn shirkadda in hab madani ah.
Waxa uu sheegay in deynta - in booliska yeesheen qalabka oo dhan qabtay iyo waxa ku hayaa baaritaan - waxay ka dhigan tahay in uu jiro cadaadis waqti.
- Ma jiro xad sare oo rasmi ah, laakiin dabcan ma waxaad tagi kartaa on aan xad lahayn. Laakiin ka fiirsaneysa sida badan baaritaanka sidaas darteed waxaan rajaynaynaa in aan diyaar ma noqon doonto ilaa-guga jiilaalka ee 2017 ka.
Source: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/utredningen-tar-minst-ett-halvar11.11.2016. 20:22	Categories